Sida loo iPod ka taabto si computer wareejiyo music
> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod xiriiri in Computer
Waa adag tahay in laga iPod taabto si computer wareejiyo music, sababtoo ah Lugood keliya ha aad u hagaagsan heeso aad iPod taabto. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay tan oo sababo, waxaa laga yaabaa inaad u xiiseynayey in ay nuqul ka heeso iyo playlists back to your computer u gurmad ama la wadaago. Tusaale ahaan, aad lumiso Lugood playlists iyaga oo si shil ama ka dib markii shil kombiyuutarka aad la tirtiro, dhammaan faylasha music on your computer yihiin laga badiyay.
Tan iyo Lugood waa ciirsi, waxa idinku samayn doonaa nuqul music ka iPod taabto si computer? Dhab ahaantii, Lugood sokow, halkan waa barnaamij si sahlan loo isticmaalo - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waxa kaliya ma ahan falaa Lugood kartaan, laakiin orso oo muuqaalada more socodyada. Iyada oo ay caawimo, waxa aad awoodi kartaa inay u dhoofiyaan heeso iyo playlists labadaba si aad u computer fudayd. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaanaysaa inaad music ka computer wareejiyo si aad iPod xiriiri aad.
In tallaabooyinka hoose, aynu ku jirno oo ku saabsan oo muujinaysa sida ay u guuraan music si aad u computer Windows aad. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo music iPod in aad Mac, download version Mac ah. Markaas qabtaan tallaabooyinka keligaa.
Tallaabada 1. Ku rakib barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPod xiriiri PC
Bilowga, rakibi oo ay maamulaan barnaamijka kombiyuutarka. Connect aad iPod xiriiri in kombiyuutarka la cable USB ah. Barnaamijkan waxaa lagu ogaan doonaa marka uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Tan iyo TunesGo Wondershare ah waa in ay leeyihiin shirkad Lugood ee, waxaa idinku waajib ah inaad kala soo baxdo iyo rakibi Lugood on your computer.
Tallaabada 2. Transfer music ka iPod taabto si computer
Si heesahaaga computer wareejiyo, waxaad riixi kartaa "in gal", badhanka on line hoose ee suuqa kala hoose.
Ama, in ay u guuraan heeso iyo playlists ka iPod taabto si computer, aad awoodo inuu riix "Media" button geedka buugga bidix. On line ugu sareeya, riix "Music" button.
Markaas, dooro songs in aad go'aansato in aad dhoofin oo guji "Dhoofinta in". Marka liiska hoos-hoos u muujinaysaa ilaa, doortaan "Dhoofinta in My Computer". Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax daaqad file browser yar. Dooro badbaadiyo Jidka on your computer in uu kaydiyo heesaha kuwaas.
Fiiro gaar ah: TunesGo (Windows) si buuxda u la jaan qaada iPod xiriiri 5, iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 3 macruufka 9/8/7/5/6. The version Mac taageertaa iPod xiriiri 5/4 socda macruufka 9,8,7, 5, & 6. Riix halkan si aad u hesho info badan oo ku saabsan iPods taageeray.
Haddii aad qabto playlists badan oo aad la xiriiri iPod, sidoo kale iyaga oo aad u guuri kartaa si aad u computer. Guji "playlist" si ay u muujiyaan suuqa kala playlist ah. Dooro playlist doonayay oo guji "Dhoofinta in".
Waxba ma ahan in aad music ka iPod taabto si computer ama playlists u hagaagsan in computer ka guurto, waa in aad haysato iPod taabashada ku xiran.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma ha uusan aad u dhoofiyaan playlists si Mac.
Marka laga reebo heeso ka iPod taabto si computer wareejinta, waxa kale oo aad kartaa music ka iPod xiriiri dib ugu maktabadda Lugood wareejiyo aad.
Video ku saabsan ka iPod taabto si computer wareejinta music
Sida loo Delete Photos on iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka iPhone in Computer
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Lugood
Sida loo dhoofiyo iPhone Xiriirada in Gmail
Sida loo Delete Photos ka iPod taabashada ee Marka
Waraaqda Music ka iPod in Computer / Lugood Maktabadda
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka shaandheeyn lagu iPod in iPod taabashada
Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod xiriiri in Computer
Sida loo Play MKV Faylal ay ku iPod